Harry Potter Hogwarts Mystery nse Ithuluzi Hack - Hack nse
Agasti 23, 2019 | 6:34 pm
Ulapha: Ikhaya / Android Hack / imidlalo / iOS Hack / Harry Potter Hogwarts Mystery nse Ithuluzi Hack
Julayi 24, 2018
Harry Potter Hogwarts Mystery nse Ithuluzi Hack 2018 Ayikho Survey (Android – iOS):
Abangane Siyakwamukela! Thina ezisebenzayo uhambo lwethu nokugenca ngempumelelo futhi namuhla futhi eza entsha Hack Ithuluzi ka Harry Potter Hogwarts Mystery umdlalo. Lokhu Harry Potter Hogwarts Mystery nse Ithuluzi Hack kuyinto elinamandla kakhulu ezingasetshenziswa aphule imithetho nokuvikeleka lo mdlalo.
Ukusebenzisa kwethu Hack Ithuluzi Harry Potter Hogwarts Mystery 2018 ungaba uhlu phezulu abadlali emhlabeni wonke. Awukho umkhawulo ukusebenzisa umkhiqizo wethu futhi akukho yokuqinisekisa womuntu noma ucwaningo oludingekayo. Ngakho qaphela futhi ungahambi iyiphi lapho ngaphandle kokusebenzisa okungenani esisodwa. Ngenxa uyojabula ngemva kokusebenzisa Harry Potter Hogwarts yethu Mystery bakhohlise Generator.
Yini Ongayenza Lokhu Harry Potter Hogwarts Mystery Ithuluzi Hack?
Njengoba wazi ukuthi yini edingekayo kule mdlalo ukudlala ngokukhululekile, ngakho sesifake ukuthi imithombo at angenamkhawulo. Uzokwazi Hack imithombo angenamkhawulo usebenzisa uhlelo lwethu ezifana:
Hack Izinhlamvu zemali Unlimited Ngo Harry Potter Hogwarts Mystery Game
Hack Gems Unlimited Ngo Harry Potter Hogwarts Mystery Game
Lezi 2 izinto kungakulethela injabulo uma une ezingenamkhawulo kokuqala yomdlalo. Phambili Uhlelo wethu wabhala konke izici zokuphepha ezifana Anti-Ban Script futhi proxy ukuVikelwa KoHlelo. Ngala zici uzobe ingozi khulula futhi ulisebenzise noma kunini kuphi.
Thina athuthukile lokhu Hack Ithuluzi Harry Potter Hogwarts Mystery 2018 kokubili kumadivayisi lapho lo mdlalo egijima ezifana:
Ungakwazi ukusebenzisa umdlalo wakho ku-device womabili ngaphandle impande nobe jailbreak usebenzisa leli thuluzi Hack. Thina ihlolwe lolu hlelo kuwo womabili amadivaysi coder ithimba lethu kanye nabasebenzisi bethu njalo futhi yi ithole 100%.
Indlela Sebenzisa Harry Potter Hogwarts Mystery nse Hack Ithuluzi?
Kulula kabi ukulanda, ukufaka uphinde usebenzise leli thuluzi nokugenca. Just thwebula kungcono ifayela ku-PC yakho noma i-Mac uhlelo ngokuchofoza ngezansi inkinobho kwisayithi yethu Hacks nse futhi uyifake. Ngemva kokufaka kufanele ukhethe idivayisi yakho (Android iOS) futhi lolu hlelo luyoba ukuxhuma nedivayisi yakho ngokuzenzakalelayo.
Bese ufaka inani lwezinto kungakanani ufuna. Iya ukubeka kwesigaba bese ukhetha zonke izinketho. Ekugcineni ubuye ikhasi lakho akhawunti ulwazi bese ucindezela “Sebenzisa Hack” inkinobho Hack izinto. Qala kabusha umdlalo wakho Futhi Ujabule.
Sifuna ngolwazi lo mdlalo kungaba kuwusizo kuwe ukudlala umdlalo.
Mayelana Harry Potter Hogwarts Mystery Game:
Harry Potter Hogwarts umdlalo imfihlakalo futhi lo mdlalo kusekelwe harry potter uchungechunge J.K Rowling. It yanyatheliswa ngo-Jam City kwase ngokusemthethweni olukhishwe 25th April 2018. Lo mdlalo itholakale kumaselula ezisekelweni ezifana iOS and Android. Game Isibhekwa 4.4 koku 5 google ukudlala futhi uphawu kungcono ukwanda phakathi kwabantu. Ukudlala amageyimu Harry Potter Hogwarts Ukugunda kakhulu.
It inikeza kuphela umdlali mode olulodwa okuyinto inhlanganisela ihluzo amangalisayo nezithombe amazing. Umculo ongemuva futhi umthombo eliganukejako isidlali.
Itulo Harry Potter Hogwarts Mystery lumayelana indaba kusukela Usuku lokuzalwa luka Harry Potter ukuze sokungena lakhe Hogwarts.
Harry ihlangabezana uyathakatha abasha futhi ngubani omfundisa zemilingo futhi izwe wizarding. Kukhona izinhlamvu eziningi umdlalo, isidlali ungakha ubuntu bakhe siqu. Lokhu uhlamvu zingamngena nezinye izinhlamvu okudlalekayo noma okungezona okudlalekayo.
Njengoba i okukhulunywe ngaye ekuqaleni ukuthi umdlalo imfihlakalo ngakho uhlamvu kungaba emakilasini magic ukufunda magic namaqhinga. Player has ukwenza imisebenzi ehlukene ukuqhubeka kule game. amandla Specific kunikezwa umdlali futhi umsebenzi uye ukuqedelwa ukuthi amandla.
Julayi 29, 2018 ngu exacthacks
Septhemba 1, 2018 Phendula
A harry potter hogwarts imfihlakalo aphambe owenza kahle lokho kuphathelene.
Mashi 14, 2019 Phendula